You na-enwe obi amamịghe ịchịkwa gị eyen si ihuenyo oge?
Home Blog akụkọ You na-enwe obi amamịghe ịchịkwa gị eyen si ihuenyo oge?
adminaccount888 4th December 2020 Akụkọ kacha ọhụrụ
“Ọtụtụ mgbe, mgbe mụ na ndị ezinụlọ na-arụkọ ọrụ, m na-ebido ịkọwara ha gbasara etu esi arụ ọrụ na kọmputa. Olee otu oge ihuenyo si atụgharị gaa na mgbaàmà ụfọdụ, yana etu esi etinye usoro kọmputa ngwa ngwa (ma ọ bụ ihuenyo ngwa ngwa) nwere ike inye aka ịtọgharịa ụbụrụ ma kọwaa ihe na-eme.
Ma ka anyi chee ya ihu. Nụ na egwuregwu vidio, ide ozi ederede, na iPad enwere ike ịmachibido iwu ụmụaka anaghị eme ka onye ahụ nwee ọ gloriousụ dị ebube. Kama nke ahụ, nye ọtụtụ ndị nne na nna, ọ na-akpali ha ozugbo ime ka ihe ọmụma ahụ mebie ma ọ bụ rụọ ọrụ na ya. Mgbe ụfọdụ, ọ bụrụ na m gwa ndị nne na nna ihe ha kwesịrị ime ka ihe wee gbanwee, m na-achọpụta na ọ na-efunahụ m. Anya ha na-apụ n'anya, ha na-asọgharị, ha dịkwa ka ha nọ n'oche a na-ekpo ọkụ. Nke a abụghị ihe ha chọrọ ịnụ. Ọ dị ka a ga-asị na m na-agwa ha na ha kwesịrị ịdị na-enweghị ọkụ eletrik. Nke ahụ bụ otú ihuenyo si gbanye mkpọrọgwụ n'ime ndụ anyị. Udiri nsogbu nke ihe m na-ekwu nwere ike iyi ihe karịrị m.
Kedu ihe na-akpata nguzogide nne na nna?
Ewezuga ịtụ ụjọ ahụ, n'agbanyeghị, ịkọwa oge oge na -emepụta mmetụta ndị ọzọ na-adịghị mma nke na-eme ka mgbochi na-aga n'ihu na-aga n'ihu. Dịka ọmụmaatụ, ụfọdụ ndị folks na-eche dị ka nke ha ịzụ ụmụ a na-ekpebi nkà. Ma ọ bụ na a na-enwe ekele maka mbọ ha ma ọ bụ ike ọgwụgwụ ha.
Ma, ọ dịbeghị anya nnukwu ọkwọ ụgbọala nke ndị nne na nna na-emegide ya mgbe ọ na-ekwu okwu na oge nge ihu bụ ikpe ọmụma. Ikpe ọmụma a nwere ike ibilite site n'ọtụtụ ụzọ, nke enwere ike kewaa ụzọ abụọ: ikpe ọmụma maka ịtụ anya na-akpata nwatakịrị ahụ mgbu, na ikpe ọmụma maka ihe ndị nne na nna nwere n'onwe ha ma ọ bụ ihe ha mere. Karịsịa, naanị atụmanya nke inwe obi amamikpe zuru imebi nguzogide.
Isi mmalite nke obi amamikpe nke ndị nne na nna nwere ike igbochi njikwa oge nlekọta ahụike:
Ikpe ọmụma na-ewepu ihe uto ma na-eche na obi nkoropụ / nchegbu / nsogbu /iwe na iwepu ngwaọrụ ga - ebute
Na-enwe obi ụtọ n'ịhụ ma ọ bụ iche n'echiche nwata ahụ “Aka ekpe” mmekọrịta mmadụ na ibe ma ọ bụ na ịnọghị "na akaghị" (ma nke a ọ na-eme ma ọ bụ na ọ bụghị)
Na-ewepụ ihe Nwata ji anagide, gbanahụ, ma ọ bụ wetuo onwe ha. Karịsịa ma ọ bụrụ na nwatakịrị enweghị ndị enyi, ihe omume ntụrụndụ, echiche efu, ma ọ bụ enweghị mmasị na ihuenyo
Ikpe ọmụma banyere ịbụ gabiga ókè ịdabere na iji ákwà dị ka “onye na-elekọta kọmputa ” ime ihe ma ọ bụ nwee obere oge
Na ikpe mara na ndị nne na nna n'onwe ha pụrụ iso kpata nsogbu ụmụ ha- ịmara ma ọ bụ n'amaghị ama-site n'iwebata ngwaọrụ n'ụlọ maọbụ na-etinyeghị oke, dịka ọmụmaatụ ("gịnị ka anyị mere?")
Okenye na-eme ụdị ngosi oge ihuenyo maka ụmụaka. Enweghi obi iru ala na-achoputa na oge nlere anya nke nne na nna adighi nma ma obu jiri ya iji zere nsogbu ma obu igbapu
Ikpe ọmụma achọghị ịhapụ oge igwu egwu / ịmekọrịta ha na nwatakiri ahụ, n’achọghị ka ha nọrọ n’otu ọnụ ụlọ, ma ọ bụ inwe mmetụta adịghị mma n’ebe nwatakịrị ahụ nọ ma ọ bụ omume nwata ahụ (iwe, iwe, iwe, enweghị mmasị, wdg); mmetụta ndị a bụ mmetụta ndị nne na nna — karịsịa ndị nne — na-ewere dị ka ndị ọha na eze na-adịghị anabata
Ọdịdị nke Ikpe ọmụma
Ikpe ọmụma bụ ihe na-enweghị obi iru ala, na, dị ka nke a, ọ bụ ọdịdị mmadụ izere inwe mmetụta ya. Iji mee ka ihe sikwuo ike, ikpe ọmụma nwere ike ịmara (mmadụ maara mmetụta amamikpe). Ma ọ bụ ọ nwere ike ịbụ amaghị ihe ọ bụla (mmadu amaghi ma jiri ya) usoro nchebe iji mee ka obi dịkwuo ụtọ). Ma ọ bụ ọ nwere ike ịbụ ebe n'etiti.
Dịka ọmụmaatụ, site na isi mmalite atọ nke ikpe ọmụma a kpọtụrụ aha n'elu, ndị nne na nna na-enwekarị ike ịchọpụta mmetụta ndị a ngwa ngwa. Agbanyeghị, maka nne ma ọ bụ nna na-agabiga ihe a ịgba alụkwaghịm, enwere ike inwe ụma ọzọ nke amamịghe na-amaghị ihe banyere nwa agbahapụ (nke mmetụta uche ma ọ bụ n'ụzọ nkịtị) ma ọ bụ banyere ibu arọ ọzọ nke ibi n'ụlọ abụọ. Guiltsono sɛnea obiara di ne yɔnko ni traumas ma ọ bụ gbahapụrụ. Ma ọ nwere ike ịbụ nke etu ọnọdụ siri dị. Nke a nwere ike iduga ịindụbiga mmanya ókè nke na - eme ka ike dị ike n'ụlọ na-agbada.
Tụlee ihe banyere Ali, a dara mbà n'obi nwata nwanyi di iri na ato. Ọ na-eri ahụ social media, ọnwụ na onwe ya, a na-amaja ya n'ịntanetị, na ada ada n'ụlọ akwụkwọ. Baabi a wote no, sɛ wutumi hu baabi a wopɛ a, wubehu baabi a ahobammɔ wɔ. Nne Ali emeghị ugboro ugboro ịgbaso na iwepu ohere nke ngwaọrụ nwata n'abalị na n'ime ime ụlọ. Nke a bụ n'agbanyeghị ọtụtụ okwu gbasara njikọ dị n'etiti ìhè na-abali site na ihu na ịda mba / omume igbu onwe, mgbasa ozi ọha na eze na ịda mba / ùgwù onwe onye, na mgbasa ozi mgbasa ozi na iji ike emegbu mmadụ. N’ezie, nne a nwere nghọta dị omimi banyere sayensị na nyocha n’azụ nchọta ndị a.
Obi Gutọ na-echere Gị
N'elu ala, enwere obi amamikpe banyere iwepụ ihe Ali ji gbapụ na ịnwe onwe ya. Ma n'okpuru nke ahụ bụ ihe mkpuchi ọzọ nke were oge tupu nne ekweta. O ji anya nke uche ya hụ nwa ya nwanyị nke na-ewe iwe na-ekwukwa okwu ọjọọ dị ka “Akpọrọ m gị asị!” na “You're na-emebi ndụ m!” (nka umuaka nwere nka n'oge a di nma). Ihe nkiri a na-eche n'echiche jikọtara ya na a egwu nke nwa ya nwanyị “anaghị ahụ m n’anya ọzọ”. Nke bụ amụma na-enweghị isi na-esiteghị na ịgba alụkwaghịm kamakwa site na nne n'oge nwata. Maka ezinụlọ a, enwere ọtụtụ amamikpe na amaghị ama na nchekasị na-aga. A ghaghị ịrụ ọrụ tupu mama ahụ enwee ike ịhazi oke kwesịrị ekwesị.
Dị ka otu akụkụ, ụmụaka — ọkachasị ụmụaka toro eto na ụmụ nwanyị mana ụmụ nwoke nwekwara ike ime ya — nwere ike iburu “adịghị ike” ndị a ma were ha duhie ndị nne na nna. Ihe omimi a nwere ike bụrụ mbibi kachasị njọ n'ihe gbasara teknụzụ iri mmadụ ahụ na n’ezinụlọ nwere naanị nne ma ọ bụ nna.
Ihe ịrịba ama na ikpe ọmụma nwere ike imetụta njikwa oge
Ma ọ bụrụ na ikpe ọmụma ahụ amaghị ihe, olee otu anyị ga-esi mara ma ọ na-emetụta anyị? Dị ka e kwuru, n'ihi na ikpe ọmụma enweghị ike ịnagide, anyị na-eji usoro nchekwa iji kọwaa ya. A bịa n'ihe gbasara elektrọnik, otu ụzọ ndị nne na nna na-asị ka ikpe mara bụ ka ha jiri ya mee ihe: "Oge-oge bụ naanị oge ụmụaka m nọ jụụ". "Eletrọniki na-ekwe ka m nweta ihe". "Oge ihuenyo bụ naanị ihe na-akpali akpali na-arụ ọrụ". "Ọ bụ ihe ụmụaka niile na - eme, na agbanyeghị nwa m jiri ya karịa ndị ọzọ". "Naanị m hapụ ya ka ọ kpọọ egwuregwu agụmakwụkwọ". Were gabazie. Ọ bụrụ na ịchọta onwe gị iji amamihe nwa gị eme ihe n'agbanyeghị ịmara, ịnụ, ma ọ bụ ịgụ na ịbelata ma ọ bụ ịme ihe elektrọnik ngwa ngwa nwere ike ịdị mkpa, meghee n'uche na ikpe ọmụma nwere ike ịbụ ụgbọ oloko ahụ.
Ihe ngosi ozo di na ikpe nke ikpe mara ma obu na ihe nlere anya nge gi eme gi aru ma obu echegbu onwe ya. Dị ka e kwuru na mbụ, nke a pụrụ ịpụta ìhè site n’izere isiokwu ahụ ma ọ bụ n’ịchọ ụzọ isi mebie ihe ọmụma ahụ. “Ọ bụrụ na ọ dị ya, gịnị mere ndị dọkịta agaghị ama na nke a bụ eziokwu?” ma ọ bụ “Ọ bụrụ na ọ bụrụ na ọ bụ ya ka anyị niile ga-anọ n’uche / riri / iwe /” ma ọ bụ “Nke ahụ bụ ihe ha kwuru banyere TV n’oge gara aga, kwa-anyị mechara pụta!”
Nzaghachi ikpere nke ikwenye ozi ahụ n'eleghị anya n'ime ya nwere ike ịbụ ihe ịrịba ama na enwere ihe ị na-apụ na ojiji ihuenyo nke na-egbu mgbu ịtụle. Iji maa atụ, iwepụta oge iji nọrịa ezinụlọ n’ejighị ihe ngebichi nwere ike ịmanye ndị nne na nna iche nsogbu ihu na a alụmdi na nwunye na ha ga-eleghara anya.
Imeri Ikpe ọmụma metụtara Ihuenyo oge njikwa
Nke mbụ, mee ike karịrị ike mmadụ iji gwa onwe gị eziokwu gabigara ókè. Dị ka ihe atụ, n’otu ezinụlọ nwere nwa nwoke dị afọ itoolu nke egwuregwu vidio riri ahụ́, ka ọtụtụ ọnwa dechara egwuregwu vidio n’ụlọ, nne weghachiri ha mgbe ha gara ezumike. N'ileghachi anya na mbụ ọ dị ka a ga-adọnye ya n'echiche nke afọ ojuju wee chee na ọ ga-adị mma ịnwale ha ọzọ. Ma mgbe nne dara iwepu egwuregwu ọzọ mgbe ha na-akpata n'ụzọ doro anya a nlọghachi, a manyere ya ime nnyocha mkpụrụ obi. O mechara kwuo, sị: “Ọ bụghị naanị na egwuregwu ahụ riri ya ahụ́. Ọ bụ ya Ọ riri m ahụ́ na ọ na-arịgo elu ụlọ ya. ”
Nke a abụghị naanị mkpa maka oge dị jụụ ọ na-anabata. Kama, ọ na-ekweta na mgbe mgbe, ọ naghị achọ ịnọnyere nwa ya nwoke. Ọ ka nọ na-alụ ọgụ na-ewulite echiche nke onwe ya na-enweghị ihu na ihu wee nwee ike iwe iwe. Ihe ngwọta ebe a abụghị ịmụrụ akwụkwọ ọzọ, kama ịchọta nkwado ọzọ. O mezuru site n'ịgwa ndị òtù ezinụlọ ka ha soro ya mee njem kwa izu.
Ọzọ nne tinyere mmetụta a n'ezoghị ọnụ. Mgbe m tụrụ aro ka ọ mee ngwa-ngwa elektrọnik iji nyere nwa ya nwoke nsogbu na agụmakwụkwọ - akụkụ dị mkpa nke iji otu nwa na-anọkọ nwa ahụ-ọ zara, “Gịnị kpatara m ga-eji mee nke ahụ? Ọ na-eme ka obere oghere! ”
Ọ dị mma, ikekwe nne ikpeazụ ahụ anaghị enwe obi amamikpe kwa se ebe ọ bụ na ọ kwupụtara mmetụta ya n'egbughị oge. Mana m na-agwa gị akụkọ a iji gosi ka ọ dị. Nke na-ewetara m isi okwu m. Ewezuga ime ihe n'eziokwu na ikweta mmejọ ma ọ bụ mmetụta ndị ọzọ nwere ike imebi ihuenyo gị-njikwa oge, mara na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ezinụlọ ọ bụla na-ahụ ụfọdụ nchikota (ma ọ bụ niile) nke isi ihe ndị a kpọtụrụ aha n'elu. Ọ bụ nkịtị.
Ihe ọzọ dị mkpa na-eme ka obi na-ama anyị ikpe n’oge gara aga bụ mgbaghara. Nke a dị mkpa karịsịa maka ihe # 5 dị n'elu, ọ nwere ike ịgụnye mgbaghara onwe ma ọ bụ ịgbaghara di ma ọ bụ nwunye gị ma ọ bụ ihe ndị ọzọ onye nlekọta. Ndị nne na nna nwere ike ịdị na-echegbu onwe ha, na-echegbu onwe ha, ma ọ bụ na-eti onwe ha ihe n'ihi ihe ndị merela eme. N’ime ụdị amamikpe niile, onye a nwere ike bụrụ ihe kacha egbu mgbu, karịchaa ma ọ bụrụ na nwatakịrị ahụ nwere nsogbu dị ka autism, ADHD ma ọ bụ nsogbu mgbakwunye nne ma ọ bụ nna na-amalite ịghọta n'ezie ike nke hyperarousal metụtara dysregulation na ihe ize ndụ nke ị addictionụ ọgwụ ọjọọ na ndị na-adịghị ike.
Ka o sina dị, ichebara ihe merela eme na-abaghị uru. Ma ewezuga nke ahụ, ruo n'oge na-adịbeghị anya, ọha na eze amachaghị ihe egwu. Ọbụna ndị dọkịta na-eleda ha anya ọbụna ugbu a. N'elu ya, enwere ulo oru ndi oru ndi oru di omimi marketing usoro iji mepụta obi abụọ na mgbagwoju anya banyere ihe egwu ndị ọha na eze na-atụ ụjọ kwa ụbọchị. Ihe ize ndụ ọ bụla wetara n'ihu ọha anya bụ ndị ndị naysayers na-akwado: “Ndị na-egwu egwuregwu na-eme ndị dọkịta na-awa ahụ ka mma!” "Social media na-enyere jikọọ anyị niile!" “Teknụzụ na-agbanwe agbanwe mmụta! ” were gabazie. Iri ụda ọ bụla na-ezigara ndị nne na nna ozi ugboro ugboro na iji teknụzụ dabeere na ihuenyo jupụtara uru. Ọ bụ “otú ụmụaka si ebi ndụ taa.”
Ma ọ bụrụgodị na ị nweghị ike ịgbaghara onwe gị ma ọ bụ onye ọzọ ozugbo, ekwela ka nke ahụ gbochie gị ịga n'ihu. Malite ịmalite ime ihe - n'ụdị agụmakwụkwọ ma ọ bụ site n'ịgwa ezinụlọ ndị ọzọ na-enweghị ihu igwe. Mee ihe mgbaru ọsọ gị ịnwale nnwale eletriki ngwa ngwa maka izu atọ na anọ ọ bụrụgodị na i kwenyeghị na ọ ga-enyere aka. Ozugbo ndị nne na nna malitere ịhụ uru na mgbanwe ndị dịịrị nwa ha na ezinụlọ ha, ọ na-adị ha ngwa ngwa ịmalitekwa inwe mmetụta nke ịbụ ndị na-enweghị enyemaka gaa na ndị nwere ikike. ”
a isiokwu e bu ụzọ bie ya na Psychology taa na afọ 2017. E degharịrị ya iji belata ahịrịokwu ma belata foto.
Dr Dunckley bu nwata dibia uche akwukwo na ode akwukwo nke: Tọgharia Brain Nwa Gị: Atụmatụ izu anọ iji kwụsị njedebe, bulie akara ule na ịkwalite nkà mmụta mmekọrịta mmadụ na ibe site na ịgbanye nsonaazụ nke oge elektrọnik. Lee ya blog na drdunckley.com.
Kekọrịta isiokwu a